Khin Maung Chin: Adware
အဲလိုလိုက်ကြည့်နေရင်းက ဘယ်ကဘယ်လိုဝင်လာမှန်းမသိတဲ့ Adware ဆိုတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေရဲ့ Systems တွေကို ဘာအလုပ်မှမလုပ်နိုင်တော့အောင် ရပ်ဆိုင်းပစ်လိုက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ပြသနာကောင်တွေဝင်လာပါလေရောဗျာ. ကျနော်လည်းစက်ကို restart ပေးပြီးရှင်းဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တော့အချိန်မမှီတော့ပါဘူး.. restart ပေးပြီး Window ပြန်တက်လာတဲ့အခါကြတော့ Display မှာ Icon လေးတွေကလွဲလို့ ကျနော်တင်ထားတဲ့ Gadgets တွေရော၊ Display Image တွေပါလုံးလုံးပျောက်ကုန်ကြပြီးအောက်ဖက် Task bar ပေါ်မှာ Risk ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ Warning Box လေးပဲတက်တက်လာတော့တယ်ဗျာ.. ကျနော်လည်းပြာသွားတယ်. အရင်ဗိုင်းရပ်စ်တွေ အကိုက်ခံရတာတွေတော့ရှိဖူးပါတယ်.. ခုဟာက အရင်ပုံစံတွေနဲ့လုံးဝမတူပဲ တစ်မျိုးဖြစ်နေတာမို့ လန့်လည်းလန့်သွားတယ်လေ... မလန့်ပဲနေနိုင်ရိုးလားဗျာ.. ကျနော်က IT သမားမဟုတ်လေတော့ နည်းပညာတွေကိုအလွတ်အသုံးမချတတ်ဘူးလေ.. နည်းနည်းပါးပါးမှတ်ထားတာလေးတွေကလည်း စက်ထဲမှာပဲ Text Document တွေအနေနဲ့ သိမ်းထားတာဆိုတော့ စိုင်းစိုင်းပြောသလို '' သေပြီဆရာ '' ပေါ့.
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘာဆိုဘာမှဖွင့်လို့မရတော့အောင် Systems တွေကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပြီလေ..
ဒါနဲ့ကျနော်စွမ်းသလောက်တော့ကြိုးစားပါသေးတယ်... မရတဲ့အဆုံး မနက်ငါးနာရီထိုးကာနီးမှ အိပ်ယာဝင်လိုက်ရတာပေါ့.. နောက်နေ့သွားစရာတွေလုပ်စရာတွေပြီးတာနဲ့ အိမ်ပြန်လာပြီး ကြုံနေရတဲ့ပြသနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတာပေါ့ဗျာ...
ပြီးတော့ ကျနော်ဝယ်ထားတာကကျနော်နဲ့ကီလိုမီတာ နှစ်ရာကျော်ဝေးတဲ့တခြားမြို့မှာနေတုန်းကဆိုတော့ ဝယ်တဲ့ဆိုင်ကိုလည်းသွားပြဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ.. ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲလိုမလုပ်ချင်ဘူး.. ဘာလို့မလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ ကျနော်သိနေတယ်.. ဒီပြသနာကအဲလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ပြသနာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ.. နည်းကိုလည်းသိနေတယ်..မမှတ်မိလို့မလုပ်နိုင်တာဆိုတော့ ဒီဟာလေးအတွက်ကြောင့်နဲ့ ပိုက်ဆံထောင်ချီ ပြီးအကုန်မခံချင်ဘူးလေ... နောက်ဆုံးကြံရာမရတော့တာနဲ့ ထရောင်ဟိုင်မ်းမြို့နဲ့သုံးနာရီလောက်ကားစိးသွားရတဲ့ မြို့မှာနေတဲ့ ကျနော့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း ကိုနိုင်ဝင်းဆီကို ဖုန်းဆက်လိုက်ပါတော့တယ်ဗျာ.. သူကကွန်ပြူတာဒေါက်တာတစ်ယောက်လို့လဲပြောလို့ရတယ်လေ.. တော်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ..။
သူကတော့နည်းလေးငါးမျိုးပြောပြပါတယ်.. ပထမနည်းတွေနဲ့လုံးဝ အဆင်မပြေပေမယ့် နောက်ဆုံးတစ်နည်းကျတော့မှ အိုခေသွားပါတော့တယ်ဗျာ.. ဖုန်းချလိုက်တော့ လေးဆယ့်သုံးမိနစ်နဲ့ လေးဆယ့်ငါးစက္ကန့် တောင်ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့.. အဲတာနဲ့ ဂျီတော့ကနေပဲဆက်ပြီး လုပ်သင့်တာတွေအကြောင်းဆက်ပြောကြတော့တာပေါ့ဗျာ.....
ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ပြီး ဘယ်လိုပြန်ရှင်းလိုက်တယ်၊ ဖြေရှင်းတဲ့နည်းတွေကို ဘယ်လိုရခဲ့တယ်ဆိုတာ အကျဉ်းချုပ်ပြီး အောက်မှာရေးပေးလိုက်ပါတယ်.. ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး.. ကျနော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကို သူငယ်ချင်းတို့အားလုံးကို သိစေချင်လို့ပါ.. နောက်ပြီးကျနော့်လိုသိပ်နားမလည်သေးပဲကွန်ပြူတာသုံးနေကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေလည်းရှိကောင်း ရှိနိုင်တာမို့ ကိုယ်တိုင်ကြုံလာရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရမလဲဆိုတာ အကြံပေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ ခုလိုချရေးလိုက်တာပါ.....။ ITနည်းပညာရှင်တွေကိုဒီပို့စ်လေးကမရည်ရွယ်ပါဘူးဗျာ.. ကျနော့်လို အတောင်ပံပေါက်ကာစ. ဘလော့မရေးတတ်ရေးတတ်ရေးနေတဲ့သူတွေကိုသာရည်ရွယ်ပါတယ်။
အစ်ကိုအစ်မများအားလုံး ကျနော့်ကို နားလည်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်နော်.. အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ..။
Computer သုံးနေရာမှ ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်လိုက်သည့် အခါ နကိုတင်ထားသည့် desktop background မှာ မရှိတော့ဘဲ အမဲရောင်မျက်နှာပြင် အလယ်တွင် စာတမ်းသာပေါ်နေတော့သည်။
ထို့ပြင် ညာဘက် အောက် Taskbar တွင်လည်း မကြာခဏ အသံပေးခါ
Antivirus ၀က်ဆိုက် တခုဖြစ်သည့် Antivirus XP ကို အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ကာ ၀ယ်ဖို့ချည်း
မိမိကွန်ပျူတာ ၏ Desktop မျက်နှာပြင်ပေါ် တဖျတ်ဖျတ်ဖြင့်ပေါ်လိုက်၊ အသံပေးလိုက်၊ ထိုအသံကြားသည့် Wizard ကို သွားနှိပ်လိုက်သည့် အခါ အင်တာနက် Browser ကိုဖွင့်ပြီး Anti-Virus ဆော့ဖ်ဝဲကို ၀ယ်ဖို့ကြော်ငြာလိုက်ဖြင့်အလုပ်ကောင်းကောင်း
ဒီနည်းလေးတွေက ဖေ့စ်ဘွက်ကနေ ကိုအောင်မျိုးဝင်းရှာတင်ထားတဲ့ပို့စ်လေးထဲကနည်းတွေပါ.
ပြီးလျင် ကွန်ပျူတာကို Restart လုပ်ပြီး F8 ခလုပ်ကို နှိပ်ကာ ၀င်းဒိုးစ် Safe Mode ဖြင့်ဖွင့်ပါ။မိမိကွန်ပျူတာ တွင် Install လုပ်ထားသည့် Antivirus Software များက အချက်ပေးတာမျိုး မြင်ရမှာ ဖြစ်သဖြင့် ထိုသို့ အချက်မပေးမီ ကတည်းက Anti-Virus Application များကို ရပ်ထားလိုက်ပါ။
အဲဒီနောက်တွင် ကွန်ပျူတာကို Restart လုပ်ရန်မေးမြန်းလာလျင် လုပ်ဖို့ ညွှန်ကြားလိုက်ပြီး နောက်တကြိမ် Window Safe mode တွင် VirtumundoBeGone ပရိုဂရမ်ကို Run ပါ။ပြီး နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်မှ ComboFix ကို Run ရမည် ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ကွန်ပျူတာ၏ မောက်စ်နှင့် ကီးဘုတ်ကို မကစားရပါ။ အထက်ပါ အဆင့်များ အားလုံးပြီးလျင် ရှင်းလင်း လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် Report ထွက်လာပါလိမ့်မည်။
ပြီးနောက် တွင်ဝင်းဒိုးစ် ကိုတစ်ကြိမ်ထပ်မံ restart လုပ်ပြီး နောက် Window Live Onecareဲကို Downlaod လုပ်ယူပြီး ကွန်ပျူတာတွင် Install လုပ်ပေးပါ။
ဒီပို့စ်ကိုဖတ်လိုက်ရတုန်းကတော့ Adware ဆိုတာဘာကောင်မှန်းသေချာမသိခဲ့ပါဘူး.. ပြောသာပြောရတာ.ခုတောင်သိပ်မသဲကွဲသေးပါဘူးလေ..
အဲဒီကောင်ကိုက်လိုက်တာ ခံစားလိုက်ရတယ်ဗျာ.. ကိုအောင်မျိုးဝင်းပြောသလိုပါပဲ..
Computer ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Window တော့တက်လာပါရဲ့.. တက်လာပြီးတာနဲ့တခြားဘာမှဝင်လို့မရ..လုပ်လို့မရတော့အောင်ကိုပိတ်ပစ်
လိုက်တာပဲလေ.. Desktop ပေါ်ကကျနော်တင်ထားတဲ့ Gadgets တွေအားလုံးရော၊
Display Imageတွေရောပျောက်ကုန်ပြီး အပြာရောင်ရင့်ရင့်ဗလာ Screen ချည်းပဲကျန်ခဲ့တယ်လေ. ဒါပေမယ့် Icon တွေတော့မပျောက်ပါဘူး..
ဒါနဲ့ဂျီတော့တို့၊ Firefox တို့ ဝင်တော့လုံးဝ ဝင်လို့မရတော့ပဲ ညာဖက်အောက်ထောင့်ကနေ Warning ဆိုတာပဲပေါ်ပေါ်လာနေတယ်လေ.. ပိတ်လို့လဲခဏပဲ..စက္ကန့်ပိုင်းအကြာမှာပြန်ပြန်ပေါ်နေတာပေါ့ဗျာ..
ကိုနိုင်ဝင်းပြောပြသော Adware ရှင်းထုတ်နည်း
စက်ဖွင့်ပြီး Window မတက်လာခင် press Esc For start Menu ဆိုတာပေါ်လာရင် F10 ကိုနှိပ်ပြီး Safe Mode ကိုသွားခိုင်းတယ်ဗျာ..ခက်တာကသူပြောသလို F10 ကိုနှိပ်လည်းကွန်ပြူတာကမသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီးသူ့ဖာသာသူ Window ကိုပဲသွားသွားဖွင့်ပေးနေတာပါပဲ..နှစ်ခါလောက်ကြိုးစားပေမယ့် အလုပ်မဖြစ်တာကြောင့် ကျနော့်သူငယ်ချင်းကနောက်တစ်မျိုးပြောင်းလုပ်ခိုင်းပါတယ်.
အဲဒါကတော့ My Computer ကို Right Click ပြီး Manage ကိုသွား..ပြီးမှဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့..ကျနော်လည်းကပျာကရာ သူပြောသလို My Computer ကိုဝင်တော့လည်းထုံးစံအတိုင်းဝင်လို့မရပြန်ပါဘူး.. ဒါနဲ့သူကသူ့ဆီကိုစာတိုက်ကနေ ကျနော့်စက်ပို့ပေးဖို့ပြောတော့ ကျနော်လည်းပို့လိုက်ချင်တယ်.. ဒါပေမယ့်ခုနကပြောသလိုပေါ့.. ခရီးကဝေးနေတော့ ပို့လည်းမပို့ချင်ဘူးလေ..
ဘာလုပ်ရမှန်းမသိအောင်စိတ်ရှုပ်နေတုန်း သူကနောက်နည်း တစ်နည်းစမ်းခိုင်းတယ်ဗျာ...
အဲတာကတော့ Computer►Local Disk(C)►Windows►System32►msconfig ကိုဝင်ပြီးတော့ နည်းနည်းပြင်ပေးလိုက်တာ(သေချာမမှတ်ထားမိပါ၊ အမှန်ခြစ်လေးခြစ်ပေးတာပဲမှတ်မိလိုက်ပါသည်:P).ပါပဲ..
အဲလိုပြင်ပြီး အိုကေလဲပေးလိုက်ရော Restartလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားပါလေရော..ဒါနဲ့မိတ်ဆွေကြီးက Window ကို Restart လုပ်ခိုင်းရင်လုပ်ပေးလိုက်ဆိုတာနဲ့ ကျနော်လည်းလုပ်လိုက်တော့တာပေါ့ဗျာ... ပြီးတော့Windowလည်းပုံမှန်အတိုင်း ပြန်တက်လာရော..ခုနကဖြစ်နေခဲ့တဲ့ပြသနာတွေဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက် ကုန်ကြမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူး..။ဒါနဲ့ကျနော့်သူငယ်ချင်းက စက်ထဲကအန်တီဗိုင်းရပ်စ်ကို
update လုပ်ခိုင်းပြီး Full Scan ဆွဲခိုင်းတာနဲ့ Full Scan လုပ်လိုက်တာ သုံးနာရီလောက်ကြာမယ်ထင်တယ်..ပြီးတာနဲ့ဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီး Info ပြန်လာတယ်လေ...ပြီးတော့မှကျနော်ရုတ်တရက်ကိုအောင်မျိုးဝင်းတင်ထားခဲ့တဲ့
Adware ဆိုတဲ့ပို့စ်လေးကိုသတိရပြီး ရှာဖတ်ကြည့်လိုက်တော့မှ
အားပါးပါးး တစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လေ.. အဲဒီကိုအောင်မျိုးဝင်းရဲ့ပို့စ်ထဲမှာ ကျနော့်ကိုကျနော့်သူငယ်ချင်းကိုနိုင်ဝင်းအဝေးကလှမ်းရှင်းပေးတဲ့ရှင်းနည်းလေးမပါတာနဲ့ခုလို ရှည်ရှည်ဝေးဝေးရေးပြီးမသိသေးသူတွေသိသွားရအောင်ပါ..။
တင်ပေးနေတဲ့ကိုအောင်မိုးဝင်းကိုရော အချိန်ကုန်ခံအဝေးကလှမ်းပြီးကူညီဖြေရှင်းပေးတဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းကိုနိုင်ဝင်းကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေရာကနေ ပြောပါရစေ..။